Wararka - Long Bamboo Technology Group Co., Ltd. Warbixinta Mas'uuliyadda Bulshada 2020
Long Bamboo Technology Group Co., Ltd. Warbixinta Mas'uuliyadda Bulshada ee 2020
Sannadka 2020, Long Bamboo Technology Group Co., Ltd. (oo hadda loo yaqaan "Shirkadda") waxay sii wadi doontaa inay u hoggaansanto falsafadda ganacsiga ee qiime jaban, wasakheynta iyo tayada sare. Iyadoo raadinaysa faa'iidooyin dhaqaale, waxay si firfircoon u ilaalineysaa xuquuqda iyo danaha sharciga ah ee shaqaalaha, waxay ula dhaqantaa alaab -qeybiyeyaasha iyo macaamiisha si daacadnimo leh, waxay si firfircoon uga hawl -gashaa ilaalinta deegaanka, dhismaha bulshada iyo hawlaha kale ee daryeelka bulshada, waxay kor u qaadaa horumarinta isku -duwaha iyo is -waafajinta ee shirkadda lafteeda iyo bulshada , oo si firfircoon u guta waajibaadkeeda bulsho. Warbixinta waxqabadka mas'uuliyadda bulshada ee shirkadda ee 2020 waa sida soo socota:
1. Abuur waxqabad wanaagsan kana hortag khataraha dhaqaale
(1) Abuur waxqabad wanaagsan lana wadaag natiijooyinka ganacsiga maalgashadayaasha
Maaraynta shirkadu waxay qaadataa abuurista waxqabad wanaagsan iyada oo ah hadafkeeda ganacsi, waxay hagaajisaa maareynta shirkadaha, waxay kordhisaa qaybaha wax soo saarka iyo noocyada, waxay hagaajisaa tayada badeecada, waxay sii wadaa inay sahamiso suuqa caalamiga ah ee alaabta bamboo, iyo baaxadda wax -soo -saarka iyo iibintu waxay ku dhacdaa mid cusub sare Isla mar ahaantaana, waxay muhiimad siineysaa ilaalinta danaha sharciga ah ee maalgashadayaasha si maalgashadayaashu ay si buuxda ula wadaagaan natiijooyinka hawlgalka shirkadda.
(2) Hagaajinta xakamaynta gudaha iyo ka hortagga khataraha hawlgalka
Marka loo eego astaamaha ganacsiga iyo baahiyaha maareynta, shirkaddu waxay dejisay hannaan xakameyn gudaha ah, waxay u dejisay nidaam xakameyn adag meel kasta oo xakamaynta halista ah, iyo hagaajinta lacagaha lacageed, iibka, soo iibsiga iyo bixinta, maareynta hantida joogtada ah, xakamaynta miisaaniyadda, maareynta shaabadda, xisaabinta maaraynta macluumaadka iwm Isla mar ahaantaana, habka kormeerka ee khuseeya ayaa si tartiib tartiib ah u soo hagaagaya si loo hubiyo hirgelinta wax ku oolka ah ee koontaroolka gudaha ee shirkadda.
2. Ilaalinta xuquuqda shaqaalaha
Sannadka 2020, shirkaddu waxay sii wadi doontaa inay u hoggaansanto mabda'a "furan, caddaalad iyo caddaalad ah" xagga shaqada, hirgelinta fikradda kheyraadka aadanaha ee "shaqaaluhu waa qiimaha asaasiga ah ee shirkadda", had iyo jeer dadka ha hor mariyaan, ixtiraam buuxa iyo faham iyo daryeel shaqaalaha, si adag ugu hoggaansamaan una hagaajiyaan shaqaalaynta, Tababbarka, shaqo ka eryidda, mushaharka, qiimaynta, dallacsiinta, abaalmarinta iyo ciqaabta iyo hababka kale ee maamulka shaqaalaha waxay hubiyaan horumarinta xasiloonida ee shaqaalaha shirkadda. Isla mar ahaantaana, shirkadu waxay sii wadaysaa hagaajinta tayada shaqaalaha iyada oo xoojinaysa tababarka shaqaalaha iyo sii wadidda waxbarashada, iyo iyada oo la adeegsanayo farsamooyin dhiirrigelin ah si loo ilaaliyo tayooyinka muuqda iyo hubinta xasilloonida shaqaalaha. Si guul leh u hirgeliyey qorshaha lahaanshaha saamiyada shaqaalaha, wuxuu kor u qaaday xamaasadda iyo isku duubnida shaqaalaha, wuxuuna la wadaagay cinwaanka horumarinta shirkadaha.
(1) Qorista iyo horumarinta shaqaalaha
Shirkaddu waxay nuugtaa hibooyin aad u wanaagsan oo ay shirkaddu u baahan tahay iyada oo loo marayo dariiqyo badan, habab badan, iyo dhammaan, oo daboolaya maareynta, tikniyoolajiyadda, iwm, waxayna raacdaa mabaadi'da sinnaanta, iskaa wax u qabso, iyo is-afgarad si loo soo gabagabeeyo qandaraasyada shaqada qaab qoraal ah. Geedi socodka shaqada, shirkadu waxay dejisaa qorshayaasha tababarka sanadlaha ah iyada oo la raacayo shuruudaha shaqada iyo baahiyaha shaqsiyeed, waxayna qabataa anshaxa xirfadeed, wacyigelinta xakamaynta halista iyo tababbarka aqoonta xirfadeed ee dhammaan noocyada shaqaalaha, waxayna qabataa qiimaynta iyada oo lala kaashanayo shuruudaha qiimeynta. Ku dadaal inaad gaarto horumar iyo horumar guud oo ka dhexeeya shirkadda iyo shaqaalaha.
(2) Ilaalinta caafimaadka shaqaalaha iyo badbaadada shaqada iyo waxsoosaar badbaado leh
Shirkaddu waxay dejisay oo hagaajisay nabadgelyada shaqaalaha iyo nidaamka caafimaadka, waxay si adag u hirgelisay badbaadada shaqaalaha qaranka iyo xeerarka iyo heerarka caafimaadka, waxay siisay shaqaalaha badbaadada shaqada iyo waxbarashada caafimaadka, waxay abaabushay tababarro khuseeya, waxay dejisay qorshayaal degdeg ah oo khuseeya iyo dhoolatusyo la sameeyey, waxayna bixiyeen dhammaystiran oo sahayda ilaalinta shaqada ee waqtigeeda. , Isla markaana xoojiyay ilaalinta shaqooyinka ku lug leh halista shaqada. Shirkadu waxay muhiimad weyn siisaa badbaadada wax soo saarka, iyada oo leh nidaam wax soo saar oo nabdoon oo u hoggaansan xeerarka iyo heerarka qaranka iyo warshadaha, oo si joogto ah u sameeya kormeerka wax soo saarka amniga. Sanadka 2020, shirkadu waxay fulin doontaa hawlo kala duwan oo gaar ah, waxay qaban doontaa dhoolatusyo qorshe jawaab celin deg -deg ah oo kala duwan oo deegaan iyo badbaado ah, waxay xoojin doontaa wacyiga shaqaalaha ee wax -soo -saarka nabdoon; kor u qaad shaqada badbaadinta gudaha ee nabadgelyada, Ku dhiirrigelinta shaqada badbaadada shirkadda maareynta caadiga ah, si aysan u jirin wax dhammaad ah shaqada badbaadada gudaha ee shirkadda.
(3) Dammaanadda daryeelka shaqaalaha
Shirkaddu waxay si miyir leh u maamushaa oo u bixisaa caymiska hawlgabka, caymiska caafimaadka, caymiska shaqo la'aanta, caymiska dhaawaca shaqada, iyo caymiska dhalmada ee shaqaalaha si waafaqsan shuruudaha khuseeya, waxayna siisaa cunto nafaqo leh oo nafaqo leh. Shirkaddu ma damaanad qaaddo oo keliya in heerka mushaharka shaqaaluhu uu ka sarreeyo heerka caadiga ah ee maxalliga ah, laakiin sidoo kale si tartiib tartiib ah ayuu u kordhiyaa mushaharka marka loo eego heerka horumarka shirkadda, si dhammaan shaqaalaha ay u wadaagaan natiijooyinka horumarinta shirkadda.
(4) Kor u qaadida wada noolaanshaha iyo xasiloonida xiriirka shaqaalaha
Iyada oo la raacayo shuruudaha xeerarka khuseeya, shirkaddu waxay aasaastay urur shaqaale oo daryeela oo qiimeeya shuruudaha macquulka ah ee shaqaalaha si loo hubiyo in shaqaaluhu ku helaan xuquuq buuxda xagga maamulka shirkadaha. Isla mar ahaantaana, shirkaddu waxay ahmiyad weyn siisaa daryeelka aadanaha, waxay xoojisaa isgaarsiinta iyo is -weydaarsiga shaqaalaha, waxay kobcisaa howlaha dhaqanka iyo isboortiga ee shaqaalaha, waxayna dhistaa xiriiro shaqaale oo is -waafaqsan oo deggan. Intaa waxaa dheer, iyada oo loo marayo xulashada iyo abaalmarinta shaqaalaha aadka u wanaagsan, xamaasadda shaqaalaha ayaa si buuxda loo abaabulaa, aqoonsiga shaqaalaha ee dhaqanka shirkadaha waa la hagaajiyaa, waxaana la xoojiyaa awoodda dhexe ee shirkadda. Shaqaalaha shirkadda ayaa sidoo kale soo bandhigay ruuxa midnimada iyo kaalmada wadajirka ah, waxayna si firfircoon u fidiyeen gacan -qabashada markii shaqaaluhu la kulmeen dhibaatooyin si ay uga caawiyaan sidii looga gudbi lahaa dhibaatooyinka.
3. Ilaalinta xuquuqda iyo danaha alaab -qeybiyeyaasha iyo macaamiisha
Laga bilaabo dhererka istiraatiijiyadda horumarinta shirkadaha, shirkaddu waxay had iyo jeer muhiimad weyn siisaa mas'uuliyadaha ka saaran alaab -qeybiyeyaasha iyo macaamiisha, waxayna ula dhaqantaa alaab -qeybiyeyaasha iyo macaamiisha si daacadnimo leh.
(1) Shirkaddu waxay si joogto ah u hagaajisaa hannaanka wax soo iibsiga, waxay dejisaa nidaam wax soo iibsi oo caddaalad ah, waxayna u abuurtaa alaab -qeybiyeyaal jawi tartan oo wanaagsan. Shirkaddu waxay dejisay feylasha alaab -qeybiyeyaasha waxayna si adag u hoggaansameysaa oo fulisaa qandaraasyada si loo hubiyo xuquuqda iyo danaha alaab -qeybiyeyaasha. Shirkadu waxay xoojineysaa iskaashiga ganacsi ee alaab -qeybiyeyaasha waxayna kor u qaadeysaa horumarka guud ee labada dhinac. Shirkaddu waxay si firfircoon u dhiirrigelisaa shaqada hanti -dhawrka alaab -qeybiyeyaasha, iyo jaangooynta iyo jaan -goynta shaqada wax -soo -iibinta ayaa la sii wanaajiyay. Dhinac, waxay dammaanad ka qaadaysaa tayada badeecadaha la iibsaday, dhinaca kalena, waxay kaloo kor u qaadaa hagaajinta heerka maareynta ee alaab -qeybiyaha.
(2) Shirkadu waxay ahmiyad weyn siisaa shaqada tayada badeecada, waxay si adag u xakameysaa tayada, waxay dejisaa farsamooyinka maaraynta tayada badeecada muddada dheer iyo nidaamka maaraynta tayada oo dhameystiran, waxayna leedahay aqoonsi ganacsi oo wax soo saar oo kaamil ah. Shirkaddu waxay hubisaa alaabada si adag oo waafaqsan heerarka kormeerka iyo habraacyada. Shirkaddu waxay dhaaftay nidaamka maaraynta tayada ISO9001, nidaamka maaraynta deegaanka ee ISO14001, iyo shahaadada nidaamka maaraynta amniga iyo caafimaadka ISO45001. Intaa waxaa sii dheer, shirkadu waxay dhaaftay shahaadooyin badan oo awood leh oo caalami ah: soosaarka FSC-COC iyo silsiladda suuqgeynta shahaadada haynta, xisaabinta mas'uuliyadda bulshada ee BSCI Yurub iyo wixii la mid ah. Anagoo fulinayna heerar tayo leh oo adag isla markaana qaadanaya tillaabooyin xakameyn tayo leh oo tayo leh, waxaan xoojin doonaa xakamaynta tayada iyo hubinta dhammaan dhinacyada tayada wax soo iibinta alaabta ceeriin ah, xakamaynta habka wax soo saarka, xakamaynta isku xirka iibka, adeegyada farsamada iibka kadib, iwm, si loo hagaajiyo tayada badeecada iyo tayada adeegga, oo siiya macaamiisha Si loo gaaro badeecado ammaan ah iyo adeegyo tayo sare leh.
4. Ilaalinta deegaanka iyo horumar waara
Shirkadu waxay ogtahay in ilaalinta deegaanka ay tahay mid ka mid ah waajibaadka bulsheed ee shirkadaha. Shirkadda ayaa ahmiyad weyn siisa wax ka qabashada kuleylka adduunka waxayna si firfircoon u qabataa xaqiijinta qiiqa kaarboonka. Qiiqa kaarboonka ee 2020 wuxuu noqon doonaa 3,521t. Shirkaddu waxay u hoggaansantaa waddada wax-soo-saarka nadiifka ah, dhaqaalaha wareegsan, iyo horumarinta cagaaran, waxay meesha ka saareysaa tamar-sare, wasakheyn badan, iyo hababka wax-soo-saarka awoodda yar, waxay qaadataa mas'uuliyadda ilaalinta bay'ada daneeyayaasha, waxayna gaartaa horumar waara, saamayn ku yeelatay dhinacyada silsiladda sahayda, Wuxuu garwaaqsaday horumarinta wax -soo -saarka cagaaran ee alaab -qeybiyeyaasha sare iyo kuwa hoose iyo qaybiyaha shirkadda, wuxuuna ku kallifay shirkadaha warshadaha inay si wadajir ah u qaadaan waddada horumarka cagaaran iyo waarta. Shirkadu waxay si firfircoon u hagaajisaa jawiga shaqada ee shaqaalaha, waxay abuurtaa jawi shaqo oo ammaan ah oo raaxo leh, waxay ka ilaalisaa shaqaalaha iyo dadweynaha waxyeellada waxayna ka ilaalisaa bay'ada, waxayna dhistaa shirkad casri ah oo cagaar ah oo bay'adeed.
5. Xiriirka Bulshada iyo Daryeelka Dadweynaha
Ruuxa ganacsiga: hal -abuurnimo iyo horumar, mas'uuliyad bulsho. Shirkadda ayaa muddo dheer u heellanayd horumarinta hawlaha daryeelka bulshada, taageeridda waxbarashada, gacan ka geysashada horumarinta dhaqaalaha gobolka iyo hawlaha kale ee daryeelka bulshada. Masuuliyadda Deegaanka: Shirkaduhu waxay u hoggaansamaan waddada wax -soo -saarka nadiifka ah, dhaqaalaha wareegsan, iyo horumarka cagaaran si loo gaaro horumar waara. Tusaale ahaan, sannadka 2020, shirkaduhu waxay dejin doonaan qorshayaal lagu yaraynayo isticmaalka tamarta iyo hagaajinta deegaanka, laga bilaabo alaabta ceeriin, isticmaalka tamarta, "qashinka adag, biyaha qashinka, kulaylka qashinka, gaaska qashinka, iwm." "Maaraynta qalabku waxay ku socotaa wareegga wax-soo-saarka oo dhan, waxayna ku dadaashaa inay dhisto astaan ​​shirkadeed oo ah" keydinta khayraadka iyo bay'ada u habboon. "